नेपाल आज | ओली र प्रचण्डको उल्टो विदेश नीतिले नेपाल पश्चिमाको कब्जामा (भिडियोसहित)
आइतबार, २९ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
पछिल्लो समय मुलुकमा राष्ट्रिय मुद्दा भन्दा पनि शक्ति राष्ट्रहरुका मुद्दामाथि छलफल बढी केन्द्रीत भैरहेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी फर्र्किए लगत्तै अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति र चीनको बीआरआईको सम्बन्धमा नेपालका गल्ली गल्लीका चिया पसलमा समेत यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ ।
राप्रपा संयुक्तका नेता तारानाथ लुँइटेल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय मुद्दा पन्छाएर शक्ति राष्ट्रका एजेण्डामा समय खर्चिनु अस्वाभाविक छ । यो सबै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पश्चिमा राष्ट्रहरुसंगको साँठगाँठको प्रतिफल हो । यी दुई नेताले भारत र चीनलाई पन्छाएर पश्चिमालाई अंगाल्नुको परिणाम मुलुकको पहिचान र मौलिकता नै खतरामा परेको छ ।’
कहिले होली वाइन काण्ड मच्चाउने कहिले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका पक्षमा छौं भन्ने कहिले विरोध गर्ने जस्ता अपरिपक्व कुटनीतिक व्यवहारले मुलुकको शाख गिरेको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरुसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु ठिकै हो तर मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि भारत र चीनसंगको सम्बन्ध नै पहिलो हुनुपर्छ ।
‘भारत र चीनलाई चिढ्याएर नेपालको हित हुँदैन । पश्चिमा शक्तिहरुले मुलुकलाई ईसाइकरण गर्न खोजेका छन् । यहाँको स्वतन्त्रता र धार्मिक पहिचान मेट्न खोजेका छन्, यसमा ओली र दाहाल गोटी भए ।’ लुइँटेलको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको उत्ताउलो कुटनीतिकै कारण संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने सम्भावना छैन । यस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको सम्भावना पनि टर्दै गएको छ । नेपाली नेताहरुको अमेरिका र इयूप्रतिको मोहका कारण चीन पनि दिक्क भैसकेको छ ।
भारत र चीन सतर्क
पश्चिमा शक्तिहरुले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन र भारतलाई पनि ईसाइकरण गर्न खोजेका छन् । चीन र भारतले यो कुरा राम्रोसंग बुझिसकेका छन् । यसकारण उनीहरु नेपालमा बढ्दो ईसाइकरण रोक्न चाहन्छन् । नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न भारत र चीन सहमत भैसकेको लुइँटेलको दावी छ ।
अहिलेको सरकार र नेकपा पार्टी नै पश्चिमाहरुको कब्जामा परिसकेकाले भारत र चीनले कुनैपनि हालतमा यिनीहरुलाई पत्याउने स्थिति छैन । मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, जनताप्रति अनुत्तरदायी, जनतामाथि करको भार, असुरक्षा, बलात्कार, हिंसा र महङ्गीजस्ता विषयले जनता पनि विष्फोट हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन् ।
कांग्रेस प्रतिपक्षी होइन
आफनै नालायकीका कारण सत्तापक्ष नराम्ररी अत्तालिएको छ । अझ अनौठो त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी भनिएको नेपाली कांग्रेस मौन छ । उसको मौनता रहस्यात्मक छ । एनसेल, वाइडबडी, मेलम्ची जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा कांग्रेस बोल्न सकेको छैन । यसको सिधा अर्थ के हो भने सत्तापक्ष र कांग्रेस यसमा मिलेका छन् ।
अहिले कांग्रेसलाई व्यवहारत प्रतिपक्षी भन्न सकिदैन । प्रतिपक्षीको व्यवहार नगरेपछि उसलाई प्रतिपक्षी मान्ने कुरो पनि भएन । कांग्रेसबाहेक सरकारमा नभएका दलहरुलाई प्रतिपक्षी भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पशुपति र लोहनीले छाडनुपर्छ
नेता लुइँटेलले आफनो पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई नेतृत्व छोडेर दोस्रो पंक्तिलाई पद हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘दुवै नेता बुढा भैसके । अब अहिले पशुपति पारिवारिक कामका लागि भारत गएका छन् । लोहनी पनि करिब दुई महिनाका लागि अमेरिका जाँदैछन् । दुवै अध्यक्ष निस्फिक्री विदेश भ्रमणमा गएपछि पार्टी चाहीँ यहाँ कसले चलाउँछ ? ’